Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Kenya – XAMAR POST
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay khilaafka Soomaaliya iyo Kenya
By Zakariye iiman On Jun 1, 2019
Raiisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa ka hadlay Xiisadda Siyaasadeed ee soo kala dhex gashay Dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya.
Abiy Axmed oo la hadlay laanta Af-Amxaariga ee VOA-da ayaa sheegay in uu xal u raadi doono xiisada ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa uu sheegay in dowladda Itoobiya ay ku howlan tahay sidii loo soo Afjari lahaa Xiisadda Siyaasadeed ee ka dhex taagan dalalka Soomaaliya iyo Kenya, inta aysan sii badan dhibaatooyinka ay iskula kacayaan balada dal oo hada qaaday tilaabooyin wax u dhimaya xiriirkooda.
Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed waxa uu sheegay in dowladda uu majaraha u hayo ay guulo ka gaartay dhanka dib u heshiisiinta dalalka dhaca Bariga Afrika, iyadoo ay xusid mudantahay intii uu xaafiiska joogay in uu ka gaabiyay xiisadda Jabuuti iyo Eretariya oo mudo dheer isku heystay buura leyda Dumeera oo aan wali xal laga gaarin.
Waxa uu dalalka Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqay in ay dhameeyaan xiisada u dhaxeysa wax walbana ay ku dhameeyaan miiska wada hadalka, waxa uuna hadalkiisu imaanayaa iyadoo Kenya mudooyinkii danbe ay ku dhaqaaqeysay go’aano ka dhan ah Soomaaliya, taasi oo loo arko in ay cadaadis ku saareyso dowladda Soomaaliya sidii ay kaga laaban laheyd dacwada Badda oo Kenya ay ka gudbisay.
Puntland iyo Somaliland oo is dhaafsanaya 17 Maxaabiis ah